Dharkeynley Oo U Gudubtay Wareegga 3-aad Ee Tartanka | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Dharkeynley Oo U Gudubtay Wareegga 3-aad Ee Tartanka
Dharkeynley Oo U Gudubtay Wareegga 3-aad Ee Tartanka
Tartan cilmiyeedkan oo galay sanadkii 9-aad socda oo si toos ah looga daawanayo Telefishinka Qaranka iyo Raadiyaha ayaa waxaa xalay kulankii 17-aad wareegga 2-aad ku tartamayay Degmooyinka Dharkeyley Vs Jilib.
Barnaamijka sanadkani waxaa maalgelinaya Gobalka Banaadir.
Tartameyaasha ayaa muujiyey tartan aad u adag iyo asluub wanaag labada dhinac ah.
Tartameyaasha Degmada Dharkeynley waxaa la weydiiyey todobo su’aal, waxa ay ka jawaabeen 4 su’aal, iyagoo qalday 3-su’aal, balse waxa ay ka faa’iideysteen 1- su’aal oo soo hareer-martay Jilib, sidaa darteed dhibcaha tartameyaasha Dharkeynley ayaa waxay noqotay (10) dhibcood.
Tartamayaasha Degmada Jilib ee Gobalka Jubbada Dhexe waxaa dhankooda la weydiiyay 7-su’aal way ka jawaabeen 4-su’aal, 3-way qaldeen, 1-way ka faa’iideysteen kadib markii ay ay soo hareer-martay tartamayaasha Degmada Dharkeynley, sidaasi darteed wadarta guud ee dhibcaha Jilib waxa ay noqotay 10-dhibcood.
Tartanka oo xalay aad u adkaa ag ayaa la isla dhaafi waayay bar baro, balse su’aalo dheeraad ah oo lagu daray si loo kala saaro, ayaa waxaa ka faa’iideystay tartamayaasha Degmada Dharkeynley halka tartamayaasha degmada Jilib ay jawaabta su’aashii la waydiiyay qaldeen, sidaas ayaana Dharkeynley ay ku heshay 14 dhibcood, halka ay Jilib la yimaadeen 12 dhibcood.
Tartamayaasha Degmada Dharkeynley ee Gobalka Banaadir ayaa xalay ugudbay wareegga 3-aad ee tartanka.
Haddii uu Alle idmo caawa oo ah habeenka 18-aad ee tartanka waxaa la qaban doonaa labo tartan oo ay ku tartami doonaan degmooyinka Garbahaareey Vs Shibis oo ka kala tirsan Goballada Gedo iyo Banaadir, halka qeybta dambe ay ku tartami doonaan Kismaayo iyo Hodan oo ka kala tirsan Goballada Jubbada Hoose iyo Banaadir.
Previous articleDhagar-qabe Al-shabaab ah oo doonayay inuu dilo askari oo lagu qabtay Degmada Hodan+Sawirro
Next articleBeeraleeyda Xudur Oo Dalagii Ay Filayeen Baaba’ay